အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ - ဗီဒီယိုက ချက်တင် ကမ္ဘာကြီး
ဗီဒီယိုက ချက်တင် ကမ္ဘာကြီး
အွန်လိုင်းမေးခွန်းရှေ့နေ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှေးခယျြနိုငျရှေ့နေ ရှေ့နေ၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အတွက်မိမိတို့ဒေသ။ သွင်းဖို့ကြိုးစားတစ်အွန်လိုင်းမေးခွန်း။ ကြောင်းအဖြေမည်အကြောင်းကြားသူ။ မခံမယူကြပါလျှင်အဖြေကိုအွန်လိုင်း၊ထို့နောက်ဖြစ်ကောင်းသူကထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့၏ရေးသားခြင်းနှင့်အများအပြားကိစ္စများကို၏ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်နှင့်အတိုင်ပင်အွန်လိုင်းအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါတစ်ဦးပြန်ကြားချက်ကိုလူအပေါင်းတို့မေးခွန်းများကို။ တယ်လီဖုန်းအကူအညီနဲ့အကြံဉာဏ်ကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာအမျ...
တိုင္ပင္ေအွန်လိုင်းရှေ့နေ အတော်လေးမကြာခဏအလေ့အကျင့်အတွက်ဖြေရှင်းဖို့ခက်တဲ့အခြေမရှိဘဲအရည်အချင်းဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကောင်းပြီ၊အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်မဟုတ်ချွန်ထက်နှင့်အသင်အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်သောတာဝန်များကိုသတ်မှတ်မီ၊ဒါပေမယ့်ရှိပါတယ်သောအခါအကြိမ်များအတွက်လိုအပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဉာဏ်မှာညဥ့်အခါ၊နှင့်ဤအချိန်တွင်၊တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊အများအပြားပြီးသားအိပ်ပျော်.
နေန်ဆောင်မှုအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါင်းဈေးနှုန်းများ ငွေပေးချေမှု၏ရှေ့နေရဲ့အလုပ်အ-အဆိုပါဆိုတာဘာလဲအစ်းႏႈန္း. ပထမဦးဆုံးအရာသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်အလားအလာလိုင်း၏ဇဝတ်သားရှေ့နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအစ်းႏႈန္းပါဝင်ပါသည်ငွေပေးချေမှု၏အခက်ခဲတရားစွဲဆို။ အဆိုပါထိရောက်မှုအကြီးအကျယ်မူတည်စင်ပေါ်မှာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်သူစတင်အလုပ်လုပ်ရန်။ စံယန္တရားများ၏ရေတွက်ပုံ၏အကျင့်ကိုကျင့်၏တစ်ဦးဇဝတ်သားရှေ့နေအပေါ်မူတည်အောက်ပါအချက်များ: တစ်ဦးချင်းစီဝိသေသလက္ခဏာများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အတွေ့အကြုံ၏ဥပဒေရေးရာအလေ့အကျင့်ကိုအနိ...
ဒါပေမယ့်စေသည် ပွင့်လင်းမှအားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေစောင့်ရှောက်။ အဘယ်သူမျှမ။ ကဖိ။။။။ သူမည်သူမဆိုအစဉ်အဆက်တွေ့အလွန်ကြီးစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာများကြီးမသိရပါဘူး။ အချစ်အတွက်အကြာတွင်၎င်း၊ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ချစ်ရန်ပင်ခက်ခဲ။ ငါထင်:အဘယ်သူသည်ချစ်သူမရှိတော့။ သာသတၱိ သူသိေဇသိ၊လာနိုငျဒီနေရာမှာမရှိဘဲစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်လူမှုရေးဖိအားများ။ အဆိုပါဇီဝနာရီနှင့်မိဘများနေဆဲပြေး၊ပေါင်နှံဗါမကြာခဏလျော့နည်းရှိသည်မကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုအဘို့အရွေးချယ်မှု၏အဖော်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးတို့ပါဝင်စဉ်းစားတစ်ခုခုရှိလာရန...
အဖြစ်ဆိုးဖမ်း လေယာဉ်မှူး၊သင်လိုအပ်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့သင်၏သင်္ဘောသည်ရုံသာမကသင့်ရဲ့အပူအစုံအာကာသဘီး။။။၏ဒုတိယသား။ အချိန်ယူလေ့လာပြီးမှအသေးစိတ်အတွက်စနစ်တကျကြိုတင်ပြင်ဆင်အရာကိုရှေ့ဆက်တည်ရှိသည်၊သို့မဟုတ်အခြားသင်ရှို့ရန်သွားကြသည်။ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အကြို: သင်ဖြစ်နိုင်ကိုမီးရှို့၊ပြီးတော့အေးခဲပြီးတော့သေဆုံး။ ထိုအခါအားလုံးသုံးထပ်။။။အကြိမ်ကြိမ်။ မအကောင်းဆုံးရလဒ်။ သင်သိသင့်သင်္ဘောရဲ့ကိရိယာနှင့်အချက်အလက်ဒါကြောင့်အဆက်မပြတ်သင်ကျွေးမွေး၊အပိုပြီးဖွယ်ရှိသင်အသက်ရှင်ရပ်တည်ရန်။ ဤသည်သင့်ဘဝထောက်ခံမှုယူနစ်နှင့်ရှိသ...
ရှာဖွေဖို့မှကြွလာသောအခါတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဒီ-အခြို့လူနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်အစဉ်အမည်ညွှန်း-ဘုံအမြင်:"သင်သိလျှင်၊သင်တို့သိ။"ဤအရာအားလုံးကောင်းစွာနဲ့အကောင်း၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့လိုအပ်တစ်ခုခုတစ်နည်းနည်းပိုပြီးကွန်ကရစ်ထက်အမျှအူခံစားချက်။ ကျနော်တို့ရှိသည်၊ထို့ကြောင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်းကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များကိုတောင်းပေးစေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကိုပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာအကြောင်းကျွန်တော်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူ။ လျှင်ဤအမှု၊သင်ရှိသည်သေချာပါသည်မှန်ကန်သောသို့မဟုတ်မှ...
ခပ်သိမ်းသောဧည့်သည်ဤဆန်း အပြည်ခံစားရသည့်အညာင္းလေဆိပ်များကုန်း:ကျော်တစ်ဦးကစစ်သား၏တရုတ်စစ်တပ်အတွင်းအလွန်ကြီးစွာသောအမှတ်တရများတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းလက်ဖက်အခမ်းနှင့်အရည်မီးဖိုချောင်။ ဤနိုင်ငံသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြီးထွားလာနေသော်လည်းကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေ။ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင်တည်ရှိတော်မူသည်အကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်။ ဒီနိုင်ငံဆွဲဆောင်သန်းပေါင်းများစွာ၏ခရီးအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဗိသုစတိုင်များပေါင်းစပ်ထားပါသည်:အသေးစားအိမ်နှင့်အတူကိ...
အကောင်းဆုံးရှေ့နေ ဒါပေမဲ့၊ကံမကောင်းသဖြင့်၊ဤသူရှာဖွေမှုဟာမလိုအပ်ပါဘူး။ အနည်းငယ်လျှို့ဝှက်ချက်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏အကောင်းဆုံးရှေ့နေများအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါင်းအမြဲထုံး အဆိုပါအချက်ကိုကြောင်းအဆိုပါအရာရှိကစာရင်းသို့မဟုတ်ရာထူး၏ထိပ်တန်းရှေ့နေအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါင်းမတည်ရှိနိုင်မတည်၊တိုင်းတော့၊ဆန့်ကျင်ရက်နေ့တွင်အမှုကျင့်ဝတ်များထောက်ခံ။ နှင့်အဆိုပါဥပဒေအခန်းနေဆဲအတွက်အသင်းတော်သမ္မာကျမ်းစာ-လိုက်နာသည်အဓိကဘာသာရပ်၏။ ဒါကြောင့်တချို့ဝက်ဘ်ဆိုက်"တရားဝင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ရှေ့နေ"ဖြစ်ဆဲဆွဲထား၊ပြီ...
ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်မပါဘဲအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း မကြာခဏအရှိန်အဟုန်ခေတ်သစ်ဘဝများ၏မအချိန်ကိုရှာဖွေတစ်ခါတစ်ရံလိုအပ်ပြီးအမှန်တကယ်အရေးကြီးမှု၊မပြောနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အရှုပ်ထွေးဥပဒေရေးရာကိစ္စများကို။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ရရှိရန်အကြံဥာဏ်နှင့်ပတ်သက်တိကျတဲ့မေးခွန်းအပေါ်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ရှေ့နေဆပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအွန်လိုင်း။ အကယ္စားသုံးသူ၏မည်သည့်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များအသုံးပွုနိုငျအရ၊သူရရှိရန်အခွင့်အလမ်းကိုဟောပြောမှတိုက်ရိုက်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများအတွက်အရည်အချင်းအကြံဉာဏ်ဖြစ်...
သင့်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်လိမ်လည်မှုကာကွယ်တားဆီး။ ကျွန်တော်မှတ်တမ်းအထောက်အထားစစ်ဆေးခြင်းအောက်ပါအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်:တချိန်တည်းမှာ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ဌာနကျင်းပပုံမှန်စာရင်းစစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များ'ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးနှင့်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်မှုစနစ်ဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည်နှင့် ၊ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဦးဆောင်င္သည္။ သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုအဆက်အသွယ်ကို၊နှင့်ငွေကြေးလွှဲပ...
ငါတို့သည်သင်တို့ရုံအဆင့်မြှင့်တင်မှုဗားရှင်းတွေကိုငါတို့သဆိုက်၏။ ဒီထပ္မံျဖည့္စြက္သည္ကြီး၏အစိတ်အပိုင်းများ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကနေဆိုက်၊ေဘဖို့အပျနှံထားသောအကောင့်။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ပယ်ဖျက်ပေးလိမ့်မယ်င့်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ။ သင်အသုံးပြုလျှင်အနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုအဖြစ်ခံစားနိုင်ပါတယ်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပန်းပွင့်၊ကောင်းကင်၊သစ်ပင်၊စသည်တို့ကို။ (ကျနော်တို့လိမ့်မည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏ဓာတ်ပုံသည်သင့်လျော်သောသို့မဟုတ်မ)။
ရှေ့နေလို သင်ကြားသိကြပေမည်၊အကြောင်းရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်အကိုင်-ရှေ့နေ၊ရှေ့နေများ"အဖ"ဥပဒေကြောင်းအရ(သာ)ပြဿနာတွေကို၊ဒါပေမယ့်မသိစေခြင်းငှါအဘယ်သို့များအတွက်အထူးသဖြင့်သင်ကူညီအားဖြင့်ရှေ့နေ။ ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ခြင်းငှါသင့်အသက်တာ၌သင်ဖို့ခဲ့ကြ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာရှေ့နေတစ်၊ဒါပေမဲ့၊ရှေ့နေများ၊နှင့်အသီးအသီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်မှုအလုပ်လုပ်ဖို့၊သင့်ပရိုဖိုင်း။ ဤအမှု၌၊ဤဆောင်းပါးရှင်းပြဖို့သင့်ကိုငါမြင်၏ဥပဒေရေးရာအကူအညီရှေ့နေများကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်၊ငါ၏အမြင်၊သင...
ချက်တင် ချိန်းတွေ့။။။။။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူစကားပြောဆိုချက်ကျပန်းတပါးအမျိုးသားအင်တာနက်ပေါ်မှာပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်တန်ခိုးနှင့်တာဝန်လာ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာချင်တယ်ဆိုရင်အချို့သောမျိုး၏ကစားတဲ့အပေါ်အခြေခံပြီး၊ထို့နောက်သင်နာခံ။ သင်သည်အဘယ်ကြောင့်မေးကြည့်ပါ။ ကောင်းစွာ၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းတွင်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းရှိပါတယ်၊ဒါကြောင့်နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်းကျပန်းစကားကလူပျော်စရာကောင်းသည်၊လွယ်ကူသော၊နှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေသင့်အဘို့နှင့်အခြားသူများ။ ဒါကြောင့်ကြည့်ကြရမ...
ရှေ့နေတစ်ဦးထံမှအကြံဉာဏ်များ ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်မြို့တော်ကမ်းလှမ်းနိုင်ငံသားနှင့်ဥပဒေအဖွဲ့အစည်းများရရှိရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေရေးရာအကူအညီ၊ရှေ့နေရဲ့အကူအညီသို့မဟုတ်အကူအညီသင်တစ်ဦးရှေ့နေများ၏။ ရှေ့နေများကဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်မည်အဖြေအားလုံးသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကို၊သင်တို့သိရကြကုန်အံ့နိုင်သမျှအခြေအနေနှင့်၊လိုအပ်ခဲ့လျှင်၊ပေးသောကျမ်းစာအကြံဉာဏ်၏အကြံပေးသို့မဟုတ်ကိစ္စဥပဒေကြောင်းအရမြင်။
ကုမ္ပဏီဥပဒေ "ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ"ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုကနေဇန်နဝါရီ ၁၉၉၇ အဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုမှဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းနှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီအပြည့်အဝဥပဒေရေးရာမႈလိုင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးချင်းစီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း။ ပေးတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အပြည့်အဝထောက်ခံမှုအမျိုးအစားအားလုံးကို။ ကျင်းပဥပဒေရေးရာသုတေသနအပါအဝင်ပြင်ဆင်မှုကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ယူဆချက်အပေါ်အမျိုးမျိုးသောဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပါအဝင်၊အကဲဖြတ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိ...
ဥပဒေကြောင်းအရအပေါ်အကြံဥာဏ်အိမ္ရာကိစ္စများ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအိမ်ခြံမြေအေဂျင်စီ၊ဘယ်မှာဖောက်သည်ဂရုစိုက်၊မည်မဟုတ်ဆန့်ကျင်ိုင္၏အပြင်ဘက်တွင်အကြံပေးများအတွက်ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စရပ်များ။ လျှင်သင်ပြီးသားဖြစ်စေကြပြီအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်သဘောတူရှေ့တော်၌၊နှင့်ဤကိစ်စတှငျသင်ရှိသည်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာပြဿနာများ၊ကျွမ်းကျင်သူသင်ကူညီဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ မဖယ်ထုတ်အခြေအနေကိုအခါသင်ရှိသည်ဖို့ဆူးအိမ်ခြံမြေရုံး။ ကိစ္စရပ်အမည်အားဖြင့်ရှုပ်ထွေးအသစ္တည္ထားသင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အခြားတိုင်းပြည်သို့မဟုတ်အခြားမြို့။ ရှေ့နေများသည်အိမ်...
သင်စိုးရိမ်မှု၊စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြဿနာများ၊လိုအပ်တစ်စုံတစ်ယောက်မှနားထောင်။ ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာမယ့်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ကျိုးပဲ့မဟုတ်၊ဒါကြောင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်အတွက်ကျောင်းအတွက်လေ့လာ၊ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်သင့်အလုပ်။ ကိုယ်မပင်ဆင်းရဲခံရမများနှင့်အတူရဖို့သင်၏လက်ရှိအသက်တာ။ ဒါဟာဘာအရေးမပါဘူးနှင့်သင်အနှောက်အယှက်သို့မဟုတ်အသက်ဘယ်လောက်ရှိနေတယ်၊အရေးအကြောင်းပြောဆိုသူပြဿနာများ။ မကြာခဏကြောင့်လည်းကူညီပေးသည် ရိုးရိုးရှိသည်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးသင့်ရဲ့တပြင်လုံးကိုအခြေအနေ...
။ ဒါင္း ကိုအမေရိကန်ချိန်းတွေ့
စာမျက်နှာ၏လတ်ကမ်ရဲ့ခံချက်တင်။ အဆိုပါစကားလုံးကစားတဲ့သက်ဆိုင်အတွက်၎င်း၏အစဥ္တက်၊အတိုင်းအချိန်သင်အသုံးပြုကြောင်း တစ်ဦးကိုကျပန်းနှင့်အတူမိတ်ဖက်ကမ်သည်စကားပြောရန်တာဝန်ပေးစတင်၊ဒါကြောင့်အသုံးပြုအစားအကြောင်း၊သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘယ်သူ့ကိုဆက်သွယ်မှဂြိုဟ်မပါဘဲမည်သည့်အကြံပြုချက်များ၊သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်များ။ ကျွန်တော်တို့ကွတ်ကီးများကိုသုံးပါအားပေးနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောနေရာ။ အားဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ၊လက်ခံအဲဒီ၊ဒီနေရာမှာသင်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါက
ရှေ့နေရှာဖွေနေသော သို့သော်ရှိတယ်၊အခြေအနေရှိသည့်အတင်းကြပ်စွာပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘာဝတရား၊နှင့်အဆင့်အတန်းအရေးယူပုံကိုမပေါ်စေရန်အပြုသဘောရလဒ်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်၊အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့သူရှေ့နေအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အချိန်ရှိပါတယ်၊အလားတူပြဿနာများနှင့်အနိုင်ပေးအရည်အသွေးအတိုင်ပင်ခံအထောက်အပံ့နှင့်၊လိုအပ်ခဲ့လျှင်၊ကို၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်တစ်လိုင်းသာတရားတရားစွဲဆို။
မနေ့ကငါ့ဝါရင်မိတ်ဆွေရေးသားခဲ့သည်ၽြန္ုပ္၏သတင်းစကားတစ်ခုအပေါ်:တုန်းကကလပ်မှာ၊ငါမြင်မိန်းကလေးတစ်ဦး။ သူမ ပဲယုံ။ ငါမင်းကိုတွေ့ချင်၊ဒါပေမဲ့ကျွန်မလမ်းလျှောက်။ ငါ့ကိုပြောပြပါငါဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရအနိုင်ရ၏။ သို့သော်အဘယ်အချက်၊အားလုံး၊ပေးကမ်းအကြံဉာဏ်။ လျှင်လေးပေရှိသည်မဟုတ်ဖို့သတ္တိမိန်းကလေးတစ်ဦးမှပြောဆိုမည်၊ကြောက်မထိနဲ့နမ်းနှင့်သူမ၏။ အများဆုံးမိန်းကလေးငယ်များမခံမရပ်နိုင်ရွင္ကေယာက္်။ အရာနည်းလမ်းများအရပါတယ္။ စီစဉ်နိုင်သည့်အစည်းအဝေးအတွက်စင်္ကြန်ဒေသ၊ပန်နှင့်မေးလျှင်အရာအားလုံးအိုကေထွက်ရှာပါ၊သူမ၏အမည်နှင့်လိ...
ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်တွင်ချေးငွေထုတ်ပေးရန် အသုံးအများဆုံးအထက်ဘဏ်များအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်: ဖြစ်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ဘဏ်ပာင္းလဲအတိုးနှုန်းချေးငွေအပေါ်; အခြေအနေအတွက်စာချုပ်အောက်ရှိသောဘဏ်အခွင့်တောင်းဆိုရန်(ပုဂ္ဂလိကတရားရုံး); စသည်။ အတိုး၏အကာလ၏ကန့်သတ်(ထက်ပိုပြီး ၃ နှစ်); ဝှက်ထားလျက်ရှိသောအခကြေးငွေနှင့်အခြားငွေပေးချေမှု။ အဆိုပါရှေ့နေအပေါ်ချေးငွေကူညီကြလိမ့်မည်မသာပုံမှန်ချေးငွေအပေါ်၊ဒါပေမယ့်အချေးငွေ။ သာတစ်ဦးအတွေ့အကြုံအထူးကုမြင်အားလုံးအနုတ်လက္ခဏာရှုထောင့်အဘို့အငှါးဖြစ်နိုငျသောထွက်စာလုံး...
လိင်သတိပြု(အမ်ိဳးသမီး)။ လိင်သတိပြု-ပုဂ္ဂလိကအမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံဦးခ်င္းနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း။ ရိုးရှင်းစွာအနှိပ်ပါပြီးတာနဲ့စင်ကြယ်သော
ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਚੀਨ ਵਿਚ: ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ - ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਿੰਗ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝਮੇਲੇ
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းချိန်းတွေ့ မိန်းကလေးများအဘို့အချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုဓါတ္ပံုမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း အသက်ရှင်သောစမ်းချောင်းမိန်းကလေးများ ကြော်ငြာတွေချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုနိဒါန်း ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ လိင်ပျော်စရာဗီဒီယိုအခမဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ ၁၈ မှတ်ပုံတင်ခြင်းရွေးချယ်စရာ
© 2021 ဗီဒီယိုက ချက်တင် ကမ္ဘာကြီး